🥇 ▷ DxOMark wuxuu sii daayay natiijada LG G8 ThinQ isagoon xitaa ka adkaanin Mi 8 ✅
DxOMark wuxuu sii daayay natiijada LG G8 ThinQ isagoon xitaa ka adkaanin Mi 8
Mid ka mid ah gantaalada lagu tuuray, ee la soo saaray rubuc qarnigii hore, laakiin la iska indho tiray, waa LG G8 ThinQ. Haddii aadan go’aansan weli inaad iibsaneyso, malaha sababtoo ah adiga oo aadan aqoon sida uu kamaradku u fiican yahay, markaa dib u eegista kamaradda DxOMark waa inay kaa caawisaa inaad go’aankan gaarto.
LG G8 ThinQ waxaa dib u eegis ku sameeyay shaybaarada dib u eegista kaamerada waxaana dib u eegiskooda loo heli karaa daawashada dadweynaha. Nooca loo tixgeliyey waa nooc leh saddex-isku-hagaajinta kamaradda gadaal – a 12-megapixel f / 1.5 camera weyn + 16-megapixel f / 1.9 camera-xagal ballaaran-xagal + 12-megapixel f / 2.4 lens telephoto lens. Xaqiiqdii, waxaa jira ikhtiyaar labaad oo leh laba kamaradood (oo laga iibiyay Mareykanka). Ma laha muraayad telephoto ah oo zoom indhaha ah.
LG G8 ThinQ wuxuu leeyahay wadarta dhibcaha DxOMark 96. Waxay u kala jabtay 99 sawiro iyo 89 ama cajalado fiidiyoow ah. Marka loo eego qiimeynta DxOMark, G8 ThinQ wuxuu ku jiraa kaalinta 21aad, kana sarreysaa OnePlus 6, kaas oo lagu xiray hoosta Mi MIX 2S. OnePlus 6 dhab ahaantii waxay leeyihiin qiimeyn sawir oo sareysa oo ah 100, laakiin LG ayaa ka sarreeya iyada oo duubista fiidiyoowga ah.
DxOMark waxay leedahay LG waxay horumar ka sameysay isbadalkeedii ugu dambeeyay marki ugu dambeysay. Hadda waa ka dhakhso badan oo ka saxsan yahay LG V40 ThinQ. Waxay kaloo amaaneen xawaaraha ay ku fadhido xawaaraha xitaa xaaladaha dhabarka iyo taranka midabka gudaha iyo banaanka. Si kastaba ha noqotee, jiritaanka waxyaalahan farshaxanimada (waxyaabaha lagu arki karo ee sawirka aan ku jirin goobta dhabta ah) waa waxa yareya qiimeyntooda. Telefoonku wuxuu leeyahay dhibco aad u hooseeya oo loogu talagalay Bokeh iyo zoom, taas oo gacan ka geysata dhibcaha guud ee hooseeya.
Fiidiyowga, LG G8 ThinQ wuxuu qabtaa shaqo wanaagsan oo ku saabsan soo-gaadhista iyo taranka midabka. Waxaa sidoo kale lagu amaaney xasilinta. Si kastaba ha noqotee, autofocus wuxuu ku dhacaa gaar ahaan iftiinka hooseeya. Waxa kale oo jira saamayn jelly oo muuqata iyo “isbadal muuqda oo muuqaal ah oo ku socda meelaha socodka ah”.
LG V50 ThinQ 5G si ugu dambeyntii loo garaaco shelfyada May 10 AKHRI WAX DHEERAAD AH: Meey 10, LG V50 ThinQ 5G ayaa ugu dambeyntii ka soo muuqan doona shelfyada
Waad akhrin kartaa dib u eegista buuxa ee Pixel 2 ama xitaa Xiaomi Mi 8. Labada aaladoodba hadda waa ka raqiisan yihiin maadaama ay horey u ahaan jireen kuwa badalaya. Haddii aad rabto inaad lacag badan gasho, Xiaomi Mi 9 waa ikhtiyaar weyn.